Shiinaha saareyaasha xaashida dhalada ah iyo kuwa alaabada keena | Gokai
Warshadeena waxay leedahay 10 + sano oo waayo aragnimo ah xaga wax soo saarka iyo dhoofinta. Qanacsanaanta suuqa wax soo saarkeena ayaa ka sareysa 95% SGS, CE, shahaadada ISO. Waxaan diirada saarnaa xaashida muraayadda looxa ee tayada sare leh. Ku saabsan dhumucda iyo cufnaanta, feejignaanta tayada iyo adeeg wanaagsan macaamiishayada.
Xaashida muraayadda looxa ah
Dhumucdiisuna 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm ...... ilaa 100mm
Midab Midab kastaa waa caadi, sida mid saafi ah, qabow, midab madoow, caddaan, casaan, buluug, madow, madow iyo caddaan, habeen iyo habeen, muraayad, iwm. Waxaan sidoo kale ka dhigi karnaa midab habaysan oo ku saleysan shuruudahaaga gaarka ah.
Tayada Xaashidayada muraayadda acrylic-ka waxay waafaqsan yihiin shahaadooyinka CE / SGS / RoHS
1.Waxaan nahay alaab-qeybiyaha muraayadaha acrylic-ka wax ka badan 10 sano oo khibrad dhoofineed ah ；
2. Qanacsanaanta suuqa wax soo saarkeenu waa ka sareeyaa 95%.
3. Waxaan leenahay shirkadda CE iyo SGS oo shahaado haysta.
4. Xaashigeena midabka ah ee loo yaqaan 'acrylic glass glass' ma libdho 8-10 sano oo loogu talagalay dibedda.
5. U dulqaadashada xajmiga xaashida dhalada ah ee looxa ayaa ka yar glass 0.1mm.
6. Xaashigeenna muraayadda acrylic-ku waxay leedahay awood aad u fiican iyo iska caabin kiimiko ah oo ka sarreeya.
7. Habaynteenu waa la heli karaa: anti-UV. macdanta 'free-， dhawaaqa-dahaaran, iyo
8. Waxaan ku jirnaa adeeggaaga 24 saac oo khadka tooska ah ah.
9. OEM iyo ODM waa la heli karaa.
Hore: xaashi caag ah
Xiga: dahaadh xaashida looxa
Looxa Sheet looxa
Tuur Xaashida looxa loo yaqaan 'Acrylic Sheets Me Me Me Me Me Me'